हाम्रोबारे – "Eximio" लेखा विशेषज्ञ
हामी सधैं प्रत्येक अवस्थामा गर्न विशेष दृष्टिकोण खोजिरहेको & पूर्ण समाधान प्रदान.
को Eximio Contabil भन्दा बढी छ 19 को खोजी गर्न अनुभव वर्ष तपाईं एक व्यक्तिगत सेवा ग्यारेन्टी समाधान तपाईंको समस्याको लागि. हामीले केही क्षेत्रमा विशेषज्ञहरु र जस्तै कम्पनीहरु: औषधि, नागरिक निर्माण र ईन्जिनियरिङ्, खुद्रा, Conveyors र Condominiums.
हामी पनि उपभोक्ता सामान को क्षेत्रहरु मा हाम्रो प्रतिष्ठा निर्माण गर्दै, भारी उद्योग, उच्च प्रविधि, सेवाहरू, खाना र अरूलाई. हामी कुनै पनि उद्योग मा कम्पनीहरु सेवा गर्न तयार छन्:
EXIMIO सधैं ग्राहकहरु दायाँ समाधान प्रदान
हामी तपाईंको राजस्व वृद्धि गर्न कठिन काम गर्दै
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरु पुग्न प्रयासहरू
हामी जो सानो उद्यमीहरू रूपमा बाहिर सुरु मानिसहरूलाई मदत, किनभने उनीहरू हाम्रो अर्थव्यवस्था को विकास को लागि जिम्मेवार छन्, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई चाँडै सफल मदत समाधान. पहिलो हात मा हामी भविष्यमा उद्यमीहरू गर्न निःशुल्क परामर्श दिन, त्यसपछि हामी आफ्नो लगानी सुरु गर्नु अघि एक व्यापार योजना मस्यौदा सुझाव.
We present the Accounting Solution to companies and individuals focusing on SOLVING their problems. ग्राहकहरु संग कुरा, दिन-को दिन आफ्नो समस्या सुन्ने र तिनीहरूलाई सही निर्णय गर्न मदत तिनीहरूले के चाहनुहुन्छ छ! भनेर हामी के गर्नुपर्छ! स्थिर नवीनता को एक परिदृश्य मा, नयाँ प्रविधिहरू र नयाँ बजार संग, यो आवश्यक छ have the EXIMIO CONTABIL आफ्नो महत्त्वपूर्ण निर्णय तिनीहरूलाई मदत गर्न!
हाम्रो व्यवसायीक गर्न कौशल र अनुभव तपाईंको व्यापार समाधान. हामी रिपोर्ट पठाउने र मासिक दायित्व निम्त्याउने साथै आफ्नो दायित्व र प्रमाणपत्र माथि-गर्न-मिति राखन को Timeliness ध्यान. हामी ग्राहकहरु संग प्रभावकारी संचार छ, जहाँ हामीलाई आउन. यहाँ हाम्रो सेवाहरू बारेमा थप जान्न.
हाम्रो फ्रेंचाईजी कार्यक्रम जाँच
हामी आफ्नो लेखा कार्यालय खोल्न मद्दत गर्न सक्छ!
आफ्नो समय बर्बाद छैन! योग्य उम्मेदवार र साथीहरूले लागि लागू गर्न को स्वागत गर्दै छन् हाम्रो मताधिकार कार्यक्रम. तपाईं हाम्रो नीति र दर्शन संग पहिचान भने अगाडि जान अहिले दर्ता!
आज अमेरिकी शामिल!
बाटो साओ पाउलो (Galeria São Paulo) हल 8 - vila ब्रासिलिया, Aparecida डे Goiania - जाओ, 74905-770